Courses - Peak Point
Peak Point Academy ၏ သင်တန်းများ
September လမှာ ဖွင့်လှစ်မယ့် တန်းခွဲသစ်များအတွက် စတင်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ပါပြီ။ လူဦးရေကန့်သတ်ထားသည်။
Practical Translation Course
ဘာသာပြန်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူများအတွက် အရည်အသွေး မြှင့်တင်နိုင်မယ့် သင်တန်းကောင်းလေးတစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
သင်တန်းမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆရာကြီး၏ အတွေ့အကြုံများမှ Professional Translator တစ်ဦးဖြစ်စေရန် လိုအပ်သော အရည်အချင်းများ၊ သိသင့်သိထိုက်သော အချက်အလက်များကို ကဏ္ဍအစုံမှ သတင်းများ၊ ဆောင်းပါးများဖြင့် သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Active Learning Classroom ပုံစံဖြင့် သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပြီး သင်တန်းချိန်အတွင်းမှာ ဆရာနှင့် ကျောင်းသား ဆွေးနွေးခြင်းများအပြင် သင်တန်းချိန်အတွင်း မိမိသိလိုသည်များကိုလည်း မေးမြန်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
18 Seat 8 week
သင်က လုပ်ငန်းခွင်မှာ အလုပ်များသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ဖို့ Communication နည်းဗျူဟာတွေ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာလိုသူတစ်ဦး ဆိုရင်တော့ အချိန်တိုအတွင်း ထိရောက်တဲ့ သင်ကြားရေး နည်းစနစ်တွေနဲ့ သင်ကြားပေးမယ့် သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။
အသေးစား၊ အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စတင်လိုသူများ၊ စီးပွားရေးစတင်သူများ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ မန်နေဂျာများ အတွက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ကွန်ရက်ပိုမိုချဲ့ထွင်နိုင်ရန်နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံး အင်္ဂလိပ်စာဝေါဟာရများကို အချိန်တိုအတွင်းလေ့လာနိုင်စေမယ့် သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။
20 Seat 8 week
အင်္ဂလိပ်စကားပြောသင်တန်းသည် အင်္ဂလိပ်စာအခြေခံရှိပြီး အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေ့ကျင့်လိုသူများနှင့် အင်္ဂလိပ်စကားပြောစွမ်းရည်တိုးတက်လိုသူများအတွက် အဓိကရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။
• Ice-breaking Techniques
• Business Pitching Techniques
• Secrete of Networking etc. အစရှိသည့် ဘာသာရပ်များ ကိုပါလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
12 Seat 8 week
Professional	Professional Translation Course
မြန်မာစာရော အင်္ဂလိပ်စာရော ကောင်းကောင်းနားလည် ပြောဆိုနိုင်ပေမယ့် သုတ၊ ရတစာပေတွေကို မူရင်းအရသာ မပျောက်ပျက်အောင် ဘာသာပြန်ရတာ ခက်ခဲတဲ့အရာပါ။
ဘာသာပြန်ဆိုရာမှာ မူရင်းစာသားရဲ့ အာဘော်ကို အထိမိဆုံးဖြစ်အောင် ပြန်ဆိုနိုင်ဖို့အတွက် ဘာသာပြန်သူရဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်း၊ အတွေးအခေါ်၊ ပြန်ပုံပြန်နည်း၊ ရေးဟန်သားဟန် တို့က အနုပညာသက်ဝင်ပါတယ်။
စကားလုံးတစ်လုံးရွေးချယ်ခြင်းကအစ ဘာသာပြန်ဆရာရဲ့ အနုပညာအရည်အသွေးအလိုက် ဘာသာပြန်လက်ရာ အမျိုးမျိုး ပေါ်ထွက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဘာသာပြန်ခြင်းဆိုတာ အတတ်ပညာတစ်ခုဖြစ်သကဲ့သို့ အနုပညာတစ်ရပ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သင်က စာပေတွေကို မူရင်းအရသာမပျက် ထိထိမိမိဘာသာပြန်ဆိုဖို့ ကြိုးစားနေသူတစ်ဦးဆိုရင်တော့ သင့်အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ Peak Point Academy ရဲ့ Professional Translation Class ကို လှမ်းလာခဲ့ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
15 Seat 12 week
Creative Thinking and Spoken English Classes (Young Learners)
ကလေးသူငယ်တွေ အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည်နဲ့အတူ သိသင့်သိထိုက်တဲ့ ဗဟုသုတတွေ၊ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်း၊ စူးစမ်းအကဲဖြတ်နိုင်စွမ်းနဲ့ မိမိကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုတိုးစေဖို့ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမယ့် နွေရာသီသင်တန်းတစ်ခုကို ရှာဖွေနေတယ်ဆိုရင်တော့ Peak Point Academy ရဲ့ Creative Thinking & Spoken English Class ကိုသာ လှမ်းလာခဲ့ပါ။
ကလေးသူငယ်အများစု အားနည်းတတ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာ အပြောစွမ်းရည်ကို အဓိကထား သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပြီး သင်တန်းချိန်အတွင်းမှာ Listening & Speaking Skills တိုးတက်လာစေဖို့ လေ့ကျင့်ပေးသွားမှာပါ။
နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနဲ့အတူ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဆရာတွေက ကလေးဗဟိုပြု သင်ကြားနည်းတွေ၊ လိုအပ်တဲ့သင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေ၊ အတွေးအခေါ် ရင့်သန်စေမယ့် လက်တွေ့ဆန်တဲ့ ဂိမ်းကစားနည်းတွေနဲ့ သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်လို့ သင့်ကလေးငယ်ရဲ့ အချိန်တိုအတွင်း သိသိသာသာ အတွေးအခေါ်ရင့်သန်လာမှုကို အံအားသင့်ဖွယ် တွေ့မြင်နိုင်မှာပါ။
20 Seat 12 week
Creative Writing Course	Creative Writing Course
လုပ်ငန်းခွင်မှာ အကြံပြုချင်တဲ့အခါ ဖြစ်စေ၊ စီမံကိန်းအသစ်တစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ တင်ပြချင်တဲ့အခါဖြစ်စေ ကိုယ့်ရဲ့အတွေးအမြင်၊ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကို စာရေးသားပြောဆိုရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်မှာ အတွေးအမြင်ကောင်းတွေ ရှိနေပေမယ့် ကိုယ့်အတွေးအမြင်တွေကို ပီပီပြင်ပြင် ပုံပေါ်အောင် ရေးသားဖို့ ခက်ခဲနေတယ်၊ နည်းစနစ်ကျတဲ့ ရှင်းလင်းတဲ့ စာရေးသားနည်းတွေကို လေ့လာနေသူတစ်ဦးဆိုရင်တော့ Peak Point Academy ရဲ့ Creative Writing Class က သင့်အတွက်ပါပဲ။
စာရေးနည်း၊ တွေးနည်းတွေကို တစ်နေရာထဲမှာ အလွယ်တကူ လေ့လာနိုင်မယ့်အပြင် အတွေးအခေါ် စွမ်းရည် တိုးတက်လာစေဖို့ ရွေးချယ်တက်ရောက်သင့်တဲ့ သင်တန်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Advanced	Cambridge English Course
Elementary, Pre Intermediate, Intermediate, Upper Intermediate, Advance Level ဆိုပြီး Level (5) ခု ခွဲထားပြီး သင်တန်းတတ်သူများက Placement Test ဖြေဆိုပြီး မိမိနှင့်ကိုက်ညီသည့် level အလိုက် အတန်းများကို တက်ရောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အတန်းတစ်တန်းတွင် ၈ ယောက်သာ လက်ခံမှာ ဖြစ်တာကြောင့် အမြန်စာရင်းသွင်းဖို့တော့ လိုပါတယ်။ တစ်ယောက်ချင်းစီဖြစ်ဖြစ်၊ ၅ ယောက်တစ်ဝိုင်းဖြစ်ဖြစ် ညှိနှိုင်းတက်ရောက်လို့လည်း ရပါတယ်။
ရုံးဝန်ထမ်းများ အတွက် မိမိနှစ်သက်ရာ အချိန်ကို ရွေးချယ်တတ်ရောက်နိုင်ရန်လည်း စီစဉ်ပေးထားတဲ့ သင်တန်းတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။
Cambridge Course ဖြင့် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု TEFL, CISEL, TESOL လက်မှတ်ရ အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ ဆရာ၊ဆရာမများမှ တာဝန်ယူသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းကာလ ၃ လ အတွင်းမှာ နေ့စဉ် ထိတွေ့သုံးနှုန်းနေသောအကြောင်းအရာများကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြင့် တစ်ဦးချင်းပြောဆိုဆွေးနွေးစေပြီး ယုံကြည်မှုရှိရှိ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား ပြောဆိုရေးသားနိုင်စေရန် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
8 Seat 12 week
Interpretation Technique Course
သင်က စကားပြန်တစ်ဦးအဖြစ် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်လိုပါသလား???
စကားပြန်အလုပ်အကိုင်ကို Career တစ်ခုအနေနဲ့ သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလိုသူဆိုရင်တော့ Interpretation Technique Course သင်တန်းက သင့်ကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စကားပြန်တစ်ဦးဖြစ်ဖို့ သိသင့်သိထိုက်တဲ့ ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို အထူးလေ့ကျင့်သင်ကြား ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၁ ရာစုမှာ နည်းပညာတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ ကမ္ဘာကြီးက ရွာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံအချင်းချင်းကြား ကူးလူးဆက်သွယ်မှုတွေ ပိုမိုများပြားနေတဲ့ ယခုလိုအချိန်အခါမှာ စကားပြန်အလုပ်အကိုင်က အခွင့်အလမ်းတွေ ပိုမိုများပြားလာပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း နိုင်ငံတကာနဲ့ စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ ပိုမိုများပြားလာပြီး စကားပြန်အခန်းကဏ္ဍက တနေ့တခြား ပိုမို အရေးပါလာပါတယ်။နိုင်ငံတကာနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရတဲ့ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေ၊ ညီလာခံတွေ၊ အစည်းအဝေး ခန်းမတွေမှာ သက်ဆိုင်ရာဘာသာစကားတွေကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ပြောဆိုဆက်သွယ်ပေးမယ့် စကားပြန်တွေ မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါတယ်။
8 Seat 8 week